आईपीएलमा खेलाडीहरुको लिलामी आजः कुन टोलीको आँखामा पर्लान् सन्दीप ? – bampijhyala.com
Home > खेलकुद > आईपीएलमा खेलाडीहरुको लिलामी आजः कुन टोलीको आँखामा पर्लान् सन्दीप ?
आईपीएलमा खेलाडीहरुको लिलामी आजः कुन टोलीको आँखामा पर्लान् सन्दीप ?
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । न्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) १४ औँ सिजनको लागि लिलामी आज दिउँसो नेपाली समयअनुसार ३ः१५ बजे चेन्नाईमा हुँदैछ । यसका लागि २९२ जना खेलाडीहरुलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ । ८ टोलीसँग ६१ जना खेलाडी खरिद गर्ने स्थान बाँकी छ । यसमध्ये पनि ४०–५० जना खेलाडी मात्र बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ ।
सबै टोलीको नजर अस्ट्रेलियाका अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेल र न्यूजील्याण्डका काइल जेमिसनमाथि हुनेछ । लिलामीको शुरुवात ब्याट्सम्यानबाट हुनेछ,त्यसपछि अलराउन्डर,विकेटकिपर र बलरहरुमाथि बोली लगाइनेछ ।
२९२ खेलाडीमध्ये १० जना खेलाडीको न्यूनतम मूल्य २ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको । अन्क्याप्ड खेलाडीहरुका लागि २०,३० र ४० लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको छ । त्यस्तै,क्याप्ड खेलाडीहरुलाई ५०,७५,१ करोड,१.५ करोड र २ करोडको न्यूनतम मूल्य समूहमा राखिएको छ ।
एउटा टोलीले आफ्नो टोलीमा अधिकतम २५ जना र न्यूनतम १८ खेलाडीसम्म राख्न पाउँछन् । एउटा टोलीमा ८ जनासम्म विदेशी खेलाडी राख्न पाइन्छ । हाल रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लुरुसँग सबैभन्दा कम १४ खेलाडी र सनराइजर्स हैदराबादसँग सबैभन्दा धेरै २२ खेलाडी रहेका छन् ।
आईपीएलको यो सिजनमा टोलीको बजेट ८५ करोड कायम गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष बजेटमा बृद्धि गरिएन । यसअनुसार पञ्जाबसँग खेलाडी खरिद गर्न सबैभन्दा धेरै ५३.२० भारु बजेटरहेको छ । नियमअनुसार टिमले ६० करोड न्यूनतम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली युवा बलर सन्दीप लामिछाने पनि आजको लिलामीमा सामेल छन् । गत सिजन दिल्ली क्यापिटल्स टोलीमा रहेका उनलाई यो सिजन टोलीले रिलिज गरेको थियो । २० वर्षीय बलरको बेस प्राइस ४० लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।
परीक्षा हलभित्र टिकटक बनाउने विद्यार्थीको परीक्षा रद्ध
प्रधानमन्त्री ओली र बामदेव गौतम छलफल ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०३
नेपाल बैंक लिमिटेडमा करिव २ सय कर्मचारी माग्याे ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०३
नेपाल शान्तिपुर्ण इतिहासमा प्रबेश गरेको छ, अब हिंसात्मक द्वन्द्व हुने छैन : प्रधानमन्त्री ओली ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०३
द्वाल्खा म्यासमुचा खलकको कार्यालय उद्घाटन तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०३
नङको सौन्दर्य ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०३